ဆဲဗင်းဒီဇင်ဘာ Monday, January 09, 2012
အခုပုံတွေ အား လုံး ကာလာ မှန်တယ်.လှတယ်။ အလင်း ရောင် လဲ ကောင်းတယ်.ပြတ်သားတယ်.ကင်မရာ အဟောင်းတွေ မြင်တော့ လွမ်းသလိုခံစားရတယ်...
ကင်မရာ အသစ် ပြောင်းလိုက်တယ်ထင်တယ်.. ခါးပိုက်နိုက် လဲ သတိထားအုန်း..ကိုယ့်ပစ္စည်းပျောက် ရင် အရမ်းသမျှော စရာကောာင်းတယ်..
Junemoe Monday, January 09, 2012
ဟာ..ပုံတွေအကုန်မိုက်တယ်။ အလင်းအမှောင်နဲ့ ရိုက်ထားတာ တော်တော်ပြတ်သားတယ်။ အရင်တုန်းက ကင်မရာတွေ လိုချင်လိုက်တာ... အရမ်းကြိုက်တာပဲ...။ ခွင့်ပြုချက်ရရင် တင်ပေးဦးနော်. တွဲရိုက်ထားတာလေး ကြည့်ချင်လို့...:P
ဘိုဖြူ Monday, January 09, 2012
ဓာတ်ပုံတွေက၊ ဓာတ်ပုံရိုက်နေရခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့အားဆေးတစ်ခွက်လိုဘဲ ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေတယ်။ ကိုယ့်ကိုရွှင်လန်းတက်ကြွစေတယ်။ကိုယ့်ကိုအလင်းရောင်တွေလဲပေးနေတယ်။ တကယ်လို့များ...... ဓာတ်ပုံတွေက ကိုယ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကင်မရာကကိုယ့်နှလုံးသားပေါ့နော်-----အဲဒီစကားတွေကိုကြိုက်တယ်ဗျာ
Candy Monday, January 09, 2012
မမ.. အရမ်းမိုက်တယ်.. ကန်ဒီလည်း အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ ကြိုက်တယ်... ခုတလောမှ ပိုသဘောကျလာတာ.. Fashion မှာဆိုလည်း Vintage Style လေးတွေ ကြိုက်နေတယ် :P
မမမိုး ဟဲဟဲ..ခေါ်လိုက်ပြီနော်အစ်မး)
မြတ်ကြည် Tuesday, January 10, 2012
925 Sunday, January 15, 2012
ပရိုဖက်ရှင်နယ် ဖိုတိုဂရပ်ဖာ လုပ်လို့ရပြီဗျို့
CellMoe Sunday, January 15, 2012
မြတ်ကြည် Wednesday, February 01, 2012
waiting foranew post ama ;)